နှင်းဆီနီနီ: **နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖွင်.ဟ ၀န်ခံခြင်း...**
** ပထမဆုံး ဟိုင်းဆိုတဲ.စကားတလုံးနဲ. သူကိုယ်.ဘ၀ထဲကို စ၀င်လာခဲ့တယ်**
** သူကဆိုသေးတယ် သူ.ရင်ထဲမှာ ရှိတာတွေကို ဖွင်.ဟတိုင်ပင်ချင်လို.ပါတဲ......ကိုယ်နဲ.စကားပြောရရင် သူ.ရင်ထဲမှာ နွေးထွေးရတယ်ဆိုပဲ**
**ဒီလိုနဲ. ဒီလိုနဲ.ပေါ.လေ.....သူနဲ.ကိုယ့်ကြား ရင်ခုန်သံတွေ ပေါင်းစပ်မိကြတယ်...(ကိုယ်ယုံကြည်ခဲ.တာပေါ.လေ)**
**သူက ချစ်တယ် လို. ဖွင်.ဟ ၀န်ခံတော. သူမမြင်ပဲ ငါ.မျက်ရည်တွေ စီးကျလာတယ် ...၀မ်းသာလွန်းလို. ကျတဲ. မျက်ရည်ဆိုတာ သူသိမှ သိပါ.မလား**
**ကိုယ်ဟာ အချစ်ဆိုတာ ခုမှ ကြုံဖူးတဲ. ဆယ်ကျော်သက်လေးလဲ မဟုတ်ရပါဘူး.....အချစ်ကြောင်. လွမ်းဆွတ်မှုတွေနဲ.လဲ ကောင်းကောင်းရင်းနှီးခဲ.ဖူးသူပါ....ဒါပေမဲ. သူနဲ.တွေ.ချိန်မှာ ကိုယ်ဟာ ဆယ်ကျော်သက်လေးတယောက်လို ရင်ခုန်ပြီး ရင်.ကျက်တဲ.သူတယောက်လို နားလည်မှုပေးခဲ.ပါတယ်**
**မှားခဲ.ပါတယ်...သူနဲ.ပတ်သက်ရင် အများကြီးမှားခဲ.ပါတယ်...ကိုယ်.ရဲ.အချစ်တွေကို သူ.ရှေ.မှာ ချပြမိတဲ.အမှား....သူ.အပေါ်မှာ ဘာကိုမှ အပြစ်မမြင်ခဲ.မိတဲ.အမှား.....အဲ.အမှားတွေကို သူ.ကို ကိုယ်နဲ.ဝေးစေခဲ.တာလား**
**နားလည်မှု....တဲ. သူကိုယ်.ဆီက တောင်းဆိုခဲ.တဲ.အရာပါ......သူမတောင်းခင်ထဲက ပေးနှင်.ခဲ.တာ သူမသိဘူးလား....သူက ပစ်ထားခဲ.တိုင်း နားလည်စွာနဲ. နေရစ်ခဲ.တာ ...သူလိုအပ်ရင် သူ.အနားကို အပြေးသွားခဲ.တာ......သူ.ရဲ. ဥပေက္ခာတွေကို မသိကျိုးကျွန်ပြုပြီး သူ.အနားမှာ ရှိနေခဲ.တာ.....ဒါတွေဟာ နားလည်မှုဆိုတာ သူမမြင်ခဲ.ဘူးလား**
**သူ.ကို ချစ်တယ် လို.ပြောဖို. ကိုယ်နှောင်.နှေးတွေဝေနေခဲ.မိတာ စိုးရိမ်စိတ်တခုကြောင်.ပါ.....ဖွင်.ပြောပြီးခါ မှ သူက ရက်စက်ခဲ.ရင် ကိုယ်.အသည်းတွေက ခံနိုင်ရည်ရှိပါ.မလား.....ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ.ခါမှ သူကထားသွားခဲ.ရင် ကိုယ်အသက်ဆက်ရှင်နိုင်ပါ.မလား**
**အချိန်ကြာတာနဲ.အမျှ သူပေးတဲ. နာကျင်မှုတွေက တရစ်ပြီး တရစ် ကိုယ်အသည်းကို မွန်းကြပ်လာစေတယ်.....×××ရိုးသွားမှာစိုးတယ်....ငါ.ကို တကယ်နားလည်နိုင်ရဲ.လား×××လို. အတွေးတွေနဲ. တည်ဆောက်ထားတဲ. သူ.ရဲ.လွဲမှားနေတဲ. လုပ်ရပ်တွေက သူ.ရဲ.စမ်းသပ်မှုတွေက ငါ.ကို ခြောက်ခြားစေတယ်**
**နားလည်မှုကို လိုချင်လှပါပြီ ဆိုတဲ. သူကိုယ်တိုင်တောင် ကိုယ်.ကို နားမလည်နိုင်ခဲ.ပါဘူး**
**သူ.ကို သိစေချင်တယ် ဒါဟာ အချစ်စစ်ဟုတ်ရဲ.လားလို. စမ်းသပ်နေမယ်ဆိုရင် အဲဒါဟာ အချစ်စစ်မဟုတ်ဘူးတဲ.**
**သံသယများတယ်လို. စွပ်စွဲတတ်တဲ.သူကိုယ်တိုင်က သံသယတွေများနေတတ်ခဲ.တာ**
**ကြောက်လာတယ် ဘယ်တော.များ သူငါ.ကို ပစ်ထားခဲ.ဦးမလဲလို. အတွေးတွေနဲ. နေနေရတဲ.ဘ၀ကို မုန်းလာတယ်...စိတ်လိုရင် ကြင်နာနေတတ်ပြီး စိတ်မလိုရင် နေနိုင်လှတဲ. သူ့ ရဲ. လုပ်ရပ်တွေနဲ.လည်း ထပ်မကြုံချင်တော.ဘူး**
**ငရဲ နဲ. နတ်ပြည်ကို တလှည်.စီ ကူးနေရသလိုမျိုး ကြည်နူးရလိုက် ကြေကွဲရလိုက်နဲ. ငါ.အသည်းဟာ ကြာတော. ထုံဆေးထိုးထားသလို ခံစားချက်တွေ ပျက်ယွင်းလာတယ်**
**သူနဲ. တွေ.ခဲ.ရင် လို.တွေးထားခဲ.မိတဲ.အတွေးတွေ.....သူ.ကိုပေးမယ်လို. ရည်ရွယ်ခဲ.တဲ. လက်ဆောင်တွေ....သူ.အတွက် အရာရာကို ပေးဆပ်ချင်တဲ.စိတ်တွေကို တခန်းရပ်ချင်တယ်....**
**ခဏ ခဏ မေ.ပစ် ဖို.ကြိုးစားခဲ.ပါတယ် ...သူကလဲ ၀န်ခံခဲ.တယ်လေ တတ်နိုင်ရင် ကိုယ်.ကို မေ.ပြီး နေချင်ပါသတဲ့.....ကိုယ်.ကို မေ.ပစ်ဖို. ကြိုးစားနေတဲ. ချစ်သူတယောက်...ကိုယ်.ကို ထားခဲ.ဖို.ပဲစဉ်းစားနေတဲ. ချစ်သူတယောက်ကို ဘယ်လိုအင်အားတွေနဲ. ဆက်ချစ်ရမလဲကွယ်**
**ဇာတ်သိမ်းချင်တယ် သူ့ ကိုချစ်တဲ.အချစ်ကို ....သူမရှိတဲ. ဘ၀မှာ နေပျော်ချင်တယ်... သူ.ကြောင်.ခံစားရတဲ. နာကျင်ခြင်းတွေနဲ. ဝေးဝေးမှာနေချင်တယ်..သူနဲ.ဝေးရာ ဘယ်တော.မှ မမြင်ရတော.မဲ. အဝေးတနေရာကို ထွက်ပြေးသွားချင်တယ်...**
**ဒါပေမဲ့....ဒါပေမဲ့....ပြောခဲ.ချင်သေးတယ်...ကိုယ်သူ.ကို ဘယ်လောက်ထိ ချစ်ခဲ.တယ်ဆိုတာကိုလေ..
ကိုယ် သူ.အတွက် ဘယ်လောက်ရူးသွပ်ခဲ.ရတယ်ဆိုတာကိုလေ....ကိုယ်သူ.အပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ထိ မျှော်လင်.ခဲ.မိတယ် ဆိုတာကိုလေ**
**အဲလိုပဲ နောက်ဆုံးအနေနဲ.ပြောချင်တာတခုရှိပါသေးတယ်......ကိုယ်သူ.ကို ချစ်ခဲ.တာနဲ. အမျှ ..ကိုယ်သူ.အပေါ်ရူးသွပ်ခဲ.တာနဲ. အမျှ.....ကိုယ်သူ.ကို အရမ်းမုန်းမိတယ် ဆိုတာပေါ့......**
Posted by နှင်းဆီ at 6:18 PM
ချစ်သော...မေမေ........... .......................အမေ.ကျေးဇူးတွေကို ကဗျာတပုဒ်နဲ. မနှိုင်းပါရစေနဲ. အမေ .........................အမေ ပေးခဲ...